LA YAAB: Dalalka Sucuudiga, Urdun & xitaa Falastiin oo Yuhuudda u kala dhuuntay! (Yay dacwo ka yihiin?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka LA YAAB: Dalalka Sucuudiga, Urdun & xitaa Falastiin oo Yuhuudda u kala...
LA YAAB: Dalalka Sucuudiga, Urdun & xitaa Falastiin oo Yuhuudda u kala dhuuntay! (Yay dacwo ka yihiin?)
(Quddus) 30 Juun 2018 – Dalalka Carbeed ee Sucuudiga Carbeed, Urdun iyo Falastiin ayaa la sheegayaa inay marar kala duwan, iyagoon xitaa iska warqabin ay Israel ku wargeliyeen wax ay u arkaan saamaynta sii kordhaysa ee uu Turkigu ku leedahay Bariga Quddusta la haysto, sida uu werinayo warsidaha Yuhuuddu leedahay ee Haaretz.
Warku wuxuu sheegayaa in saraakiil sare oo ka tirsan 3-dan dal ee Carbeed ay Israel u sheegeen “saamaynta sii ballaaranaysa ee Turkigu ku leeyihiin xaafadaha ay Carabtu ka deggan yihiin Qudus” kaasoo ay ku sheegeen in ay “qayb ka tahay wax ay ku sheegeen ”qorshe uu madaxwayne Recep Tayyip Erdogan ku doonayo “sheegashada maamullida arrimaha Quddus”.
Israeli ayaa ashtakadan la yaabka leh ee ka timid Carabtii ay cadaawaddu kala dhexeeysay oo dhibkii haystey ka door biday inay Turki uga dacwoodaan Israel, uga jawaabtay inay muddo sanad ahba la socotay dhaqdhaqaaqa Ankara, iyadoo sheegtay in arrintu ay faraha ka bixi gaartey 2017, iyadoo sheegtay inay jiraan muwaadiniin Turki ah oo hanti ma guurto ah ka iibsanaya magaalada, kuwaasoo ay xilliyada Jimcaha isku dhacaan booliiska Yuhuudda.
MUXUU KU SALAYSAN YAHAY WALAACA CARABTU?
Dalalkan Carbeed ee Turkiga uga dacwoonaya Yuhuuddii ay colka ahaayeen ayaa ku doodaya inay ka xun yihiin 3 arrimood u kala gaar ah.
Maamulka Falastiin wuxuu diiddan yahay in sida la yiri uu dal kale sheegto mas’uuliyadda arrinta magaaladan la haysto ee Quddus.
Urdun iyadu waxay laye ka walaacsan tahay in saamaynta Turkigu ay daaqadda ka xoori karto Boqortooyada Haashimiyada oo isu aragta dalka qura ee mas’uul ka ah Masjidka Al Aqsaa oo ah kan 3-aad ee ugu barakaysan masaajidyada Islaamka.
Sucuudiga ayaa la sheegay inuu isna diiddan yahay damaca Erdogan ee Quddus, si aanu usii baahin sumcadda uu ku dhex leeyahay dunida Carabta iyo guud ahaan Islaamka, si aan loogu arag ninka qura ee hor taagan Yuhuudda iyo Maraykanka.
Previous articleSAWIRRO: Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu geedo NAADIR ah ka bililiqaystay jasiiradda Suqadra (Jidadka Dubai oo lagu arkay!)
Next articleAl-Shabaab oo qarax ku burburisay Buundo muhiim ah.